मनोरञ्जन Archives - Rising Dainik
December 15, 2020 Ramash KunwarLeaveaComment on मनोजलाई दिइन् मिनाले फेरि चुनौति, भनिन्, ‘तिमी अदालत गए म पनि जान्छु मेडिकल काउन्सिल’
काठमाडौं। हास्य कलाकार मनोज गजुरेलर उनकी पूर्व पत्नि मिना ढकालको विवाद फेरि छचल्किएको छ । मनोजले मिनाको नाम नलिइकनै शालिन ढंगले मिनाका केही टिप्पणीहरुको बिरोध गरेका थिए । उनले यस्तै आरोप लागिरहने हो भने अदालत जानुको बिकल्प नरहेको बताएका थिए। मनोजले बारम्बार आफ्ना बारेमा पूर्वपत्नी मिना ढकालले लगाइरहेको आरोपको खण्डन गरेपछि मिना पनि प्रतिउत्तर लिएर […]
पैसा लिएर मात्र अन्तरवार्ता दिन्छ भन्नेलाई जन्तरे मामाले दिए काडा जवाफ, मेलीना राई संग गाएको गीत चर्चामा भिडियो सहित्)
December 15, 2020 Ramash KunwarLeaveaComment on पैसा लिएर मात्र अन्तरवार्ता दिन्छ भन्नेलाई जन्तरे मामाले दिए काडा जवाफ, मेलीना राई संग गाएको गीत चर्चामा भिडियो सहित्)
काठमाडौं – मिठो स्वरका कारण केही समययता सामाजिक सञ्जालहरुमा भाइरल बनेका ‘जन्तरे मामा’ भनिने झापाका अमित राईको पहिलो गीत सार्वजनिक भएको छ । सार्वजनिक भएको १/२ दिनमै उनको गीत धेरैले मन पराएका छन्। स्वर सम्राट नारायण गोपालको जस्तो स्वर भन्दै भन्दै ५३ वर्षीय अमितको गीत कयौँ पटक सामाजिक सञ्जालमा सेयर भएको छ । केही समयअघि […]
पूर्वपत्नीले बारम्बार गा’ली बेइ’ज्जती गरेको भन्दै कानुनी उपचार गर्ने मनोज गजुरेलको चेतावनी
December 14, 2020 Ramash KunwarLeaveaComment on पूर्वपत्नीले बारम्बार गा’ली बेइ’ज्जती गरेको भन्दै कानुनी उपचार गर्ने मनोज गजुरेलको चेतावनी
काठमाडौँ / हास्यकलाकार मनोज गजुरेलले पूर्वपत्नीले बारम्बार गा’ली बे’इज्जती गरेको भन्दै कानुनी उपचार गर्ने चेतावनी दिएका छन्। उनले केही दिन अगाडि दोस्रो विवाह गर्न लागेको खुलासा गरेका थिए। उनको उक्त खुलासालाई लिएर सामाजिक संजालमा बिभिन्न टिप्पणी समेत भइरहेका छन्। त्यसैका आधारमा उनकी पूर्वपत्नी मिना ढकालले पनि केहिदिनदेखि टिप्पणी गर्दै आएकी थिइन्। सोमबार साँझ सामाजिक सञ्जाल […]
December 14, 2020 Ramash KunwarLeaveaComment on बुवाले दिने गरेको पिडा सम्झेर अन्जु पन्तकी छोरी रोईन, छोरी परितोषिका भन्छिन् ‘मम्मी अब बिवाह गर्नुस’(भिडियो)
काठमाडौं | हालै एक म्यूजिक भिडियो युट्युबमा सार्वजनिक भएको छ । गीतको बोल हो ‘धेरै माया नदेऊ मलाई, टाढा हुँदा गाह्रो हुन्छ’ । जसमा स्वर तथा संगीत अञ्जु पन्तले भरेकी छिन् भने छोरी परितोषिकाले अभिनय गरेकी छिन् ।यही गीतको अन्तर्वार्तामा अञ्जु पन्त र उनको छोरी परितोषिका पन्तबीच धेरै कुराहरु भए । जहाँ गीतको कुरासँगै आमा […]
मनोज गजुरेल र वर्षा सिवाकोटीको विवाह हुँदै भन्ने समाचार देख्दा वर्षा रिसले आगो –
December 14, 2020 Ramash KunwarLeaveaComment on मनोज गजुरेल र वर्षा सिवाकोटीको विवाह हुँदै भन्ने समाचार देख्दा वर्षा रिसले आगो –
काठमाडौँ / नायिका वर्षा सिवाकोटीले अनलाइन मिडियामा आएका भ्रामक समाचार देखेर दया लागेको बताएकी छन्। फेसबुकमा लामो स्टाटस राख्दै उनले भिजिटर बढाउने नाममा याथार्थ भन्दा निकै बाहिर पुगेर गरिएको प्रचारले नेपालको पत्रकारिता क्षेत्र नै बदनाम बनाएको बताएकी छन्। उनले लेखेकी छन्, ‘वर्षा सिवाकोटी र मनोज गजुरेलको विवाह हुँदै ! भनेर आएको समाचार देख्दा दया लाग्यो। […]
कमानसिंह, मृ’त्युको सेरोफेरोमा खुल्न बाँकी हुदाहुदै नारायणकाजी र सुसन काण्डका भित्री कुरा यसरी बाहिरियो अव के होला?
December 14, 2020 Ramash KunwarLeaveaComment on कमानसिंह, मृ’त्युको सेरोफेरोमा खुल्न बाँकी हुदाहुदै नारायणकाजी र सुसन काण्डका भित्री कुरा यसरी बाहिरियो अव के होला?
काठमाडौँ- कमानसिंह लामाको मृ’त्युको सेरोफेरोमा खुल्न बाँकी धेरै छ । यस्तो अवस्थामा नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले न्यायधीश शैलीमा फैसला सुनाउनुभएको छ । प्रचण्डले नारायणकाजी श्रेष्ठ र सुसन कर्मचार्यले कमानसिंहलाई अढाई करोड रुपैयाँ दिन नपर्ने भन्नुभयो । नारायणकाजीले पनि ‘मध्यस्थता मात्र गरिदिएको हूँ, मेरो आफ्नै लेनदेन होइन’ भन्नुभएको छ। नेकपाको स्थायी समिति बैठकमा प्रचण्डले रकम […]
श्रीकृष्ण श्रेष्ठको अन्तिम भिडियो,जहाँ उनले भनेका थिए,”म मायामा अन्धो भएको रहेछु”(भिडियो हेर्नुहोस)
December 13, 2020 Ramash KunwarLeaveaComment on श्रीकृष्ण श्रेष्ठको अन्तिम भिडियो,जहाँ उनले भनेका थिए,”म मायामा अन्धो भएको रहेछु”(भिडियो हेर्नुहोस)
काठमाडौँ– नायिका श्वेता खड्का पछिल्लो एक हप्तादेखि विबाहका कारण थप चर्चामा छिन् । कहाँ भेटिएला, कोहिनुर, कान्छी, लगायतका फिल्ममा अभिनय गरेरकी सामाजिक अभियन्ता समेत रहेकी नायिका श्वेताले धनगढीका प्रेमी विजयन्द्र सिंह रावतसँग विवाह गरिन ।यो उनको दोस्रो विवाह हो ।केही वर्षअघि दोस्रो विबाहका बारेमा इन्कार गर्दै आएकी श्वेताले पछिल्ला दिनहरुमा भने अब आफू एकल बस्न गाह्रो […]
December 13, 2020 December 13, 2020 Ramash KunwarLeaveaComment on जन्मदै दुवै आँखा नभएका रमेश प्रसाईको यस्तो छ जिवन कहानी, आमा भन्छिन्, ‘छिमेकीले नै वि’ष खुवाएर मारिदेउ भन्थे’ (भिडियो हेर्नुस्)
काठमाडौ । रमेश प्रसाई ताप्लेजुंगमा २०५० सालमा भएको हो । उनका बुवा आमा शिक्षण पेशामा संलग्न छन् । त्यसैले उनी साथैदेखि चेतनशिल थिए । दुवै आँखा नभएका उनी जन्मजात नै यस्तै हुन् । उनी सामाजिक विषयमा बोल्छन्, सामाजिक सञ्जालमा पनि निकै सकृय छन् । झापाको गह्रामुनीमा उनी ५ कक्षा सम्म पढेका हुन् । त्यसपछि उनी […]
December 13, 2020 Ramash KunwarLeaveaComment on चर्चित हास्यकलाकार मनोज गजुरेल र नायिका बर्षा सिवाकोटी विवाह गर्दै
काठमाडौँ- चर्चित हास्यकलाकार मनोज गजुरेल र नायिका बर्षा सिवाकोटी विवाह गर्दै चर्चित हास्यकलाकार मनोज गजुरेलले दोस्रो बिहे गर्ने तयारी गरेका छन् । केही वर्षअघि गजुरेलले पूर्वपत्नी मीना ढकालसँग सम्बन्धविच्छेद गरेका थिए । उनले आफ्नो २२ वर्ष लामो वैवाहिक सम्बन्धलाई टुङ्ग्याएका थिए ।गजुरेललले अर्को वर्षको कुनै महिना बिहे गर्न सकिने संकेत दिएका हुन् । उनले कोसँग बिहे […]
December 13, 2020 Ramash KunwarLeaveaComment on खिरपुरीवाली बेहुली श्रीमानसंगै पहिलो पटक मिडियामा, बेहुलीले गाडीमा आमालाई सम्झाउँदै गर्दा आफुपनि गाडीभित्र भावुक भएको बताउँछन् श्रीमान (भिडियोसहित)
धनगढी । यतिबेला सोशल मिडियामा जताततै खिरपुरीवाली बेहुलीको मात्र चर्चा भईरहेको छ । उनको बिहेमा जन्मघर छाडेर श्रीमानसंगै कर्म घर जाँदै गर्दा उनले गाडीभित्रैबाट बोलेका कुराहरुले उनलाई निकै नै चर्चित बनाएको छ । अन्मिएर पराईघर जाने बेहुलीहरु धेरै हुन्छन् तर उनी ती धेरै मध्यकी फरक बेहुलीको रुपमा चिनिन सफल भईन् । यतिबेलाको यो समयमा उनको […]